Funny – BaHuTuTa
အခြားစုံတွဲတွေ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုကြည့်ရင်း အားကျစိတ်နဲ့ ကြည်နှုးမိတာကို လူတိုင်းခံစားမိကြမှာပါ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း Merkel အမည်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးဟာ သူမရဲ့အစ်မဖြစ်သူ Rachel ကို ချစ်သူကောင်လေး Andrew က လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတော့မှာကို ကြိုတင်သိထားနင့်သူပါ ။ အစ်မဖြစ်သူကလည်း Andrew အား ငါ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းရင် အဲ့နေရာမှာလုပ်ပေး […]
တစ်ချို့သောအရာတွေက ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးလုံးဝမရှိဘဲ တကယ့်အပြင်ဖက်လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေက ဟာသဆန်လွန်းပြီး ရယ်မောခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးများစွာကြုံဖူးကြမှာပါ ။ ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကို စုဆောင်းပြီး ဟာသဆန်ဆန်ပျက်လုံးတွေနဲ့ ပြန်လည်ဝေမျှတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စုဆောင်းမိထားသမျှ ဟာသဆန်ဆန်ဓာတ်ပုံတွေဟာ စာဖတ်သူတွေအိမ်မှာနေပြီး ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်အောင် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။ အနှစ်သက်ဆုံးဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ထင်မြင်ချက်တွေ comment မှာ ပြန်ပေးဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့အုံးနော် […]
လူမှုကွန်ရက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဟာ နည်းပညာတိုးတက်မှုနဲ့အပြိုင် တရှိန်ထိုးအောင်မြင်လာပြီးနောက်ပိုင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်သွယ်ပြောဆိုရတာတွေဟာ အရင်ကနဲ့မတူ အလွန်ကို လွယ်ကူလာပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေမှုဟာ စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့အမျှ လျင်မြန်နေပြီး၊ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ အရောင်းအဝယ်တွေ တော်တော်များများကလည်း ဒီဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချလာတာကို တွေ့ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်တွေ အဆင့်မြင့်လာသည်နှင့်အမျှ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်တဲ့ […]
တကယ်ပါ ကိုယ်တွေမိန်းမတွေအတွက်သိပ်ထိရှရပါတယ်နေ်ာ… 1. လက်သည်းနီးဆိုးပြီးပြီချင်းတစ်ခုခုဖွင့်ရသောအခါ…. 😛 2. အရာထင်ချက်ကြီးတွေက 3. နှမြောတသခြင်းများစွာရယ်… 4. ပြောနေစရာမလိုလောက်အောင်ကိုသိနေပြီမလား… 5. ဘယ်လိုတွေတောင် အောလည်းမေး 6. စိတ်တိုစရာဖြစ်ရပ်ကြီး 7. ဆိုးဆတ်ပါနော်… 8. မငိုရဲတော့ဘူး ကြောက်သွားပြီ9. လှတပတအချိန်ဆို ဖျက်လိုဖျက်စီးနဲ့ 10. သေစမ်းကွာ […]
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့တော်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ လမ်းဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ ကားဆီကိုသွားပြီး တစ်ဖက်မြင်ကားမှန်ကိုကြည့်ကာ မိမိရဲ့ ကိုယ်အနေအထားကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Bra တွေကို အနေအထားကျအောင် အေးအေးလူလူ ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ နှာခေါင်းအတွင်းက အမွေးတွေကိုလည်း နှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုကို ကားထဲက အမျိုးသားတစ်ယောက်က တိတိကျကျ မှတ်တမ်းတင်ထားထားဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီအမျိုးသားက ကားမှန်တံခါးကို […]
တောက ရမ်းကု ဒေါက်တာနဲ့ မြို့က ပညာစမ်းတဲ့ မမတွေ့ကြလေသောအခါ… နယ်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာ… ရမ်းကုတွေခေတ်ကောင်းစဉ်ကပေါ့ ….ရမ်းကုတယောက်ကတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ် …..ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သူပေးတဲ့ဆေးကတော့.. ဘာမီတွန်ပဲ….. အာ့ကြောင့် နာမည်အရင်းတောင်ပျောက်ပြီး အားလုံးသိကြတာကတော့ သူ့နာမည် ဒေါက်တာဘာမီတွန်….. တနေ့တော့ .. မြို့ကြီးကနေ အလည်ရောက်လာတဲ့ မတ်မတ်တယောက်က ဒေါက်တာဘာမီတွန်ကို […]
ကိုကို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ သဲငယ်ရယ် “ခင်လေး ကို့ကိုပဲရိုက်ပါ´´ သူ့ဖုန်းမှ ဗီဒီယိုသံကရေချိုးခန်းထဲရေချိုးနေသော ကျနော့်ထံရောက်လာသည် ရေစိုနေသောဆံပင်ကို သဘက်ဖြင့် သုတ်ပြီးထွက်လာစဉ် သူ့မျက်နှာကိုတွေ့တော့ မျက်နှာလေးက မကောင်းလှ ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီး လက်ထဲမှသဘက်ကိုဆွဲယူကာ ကျနော့်ကိုကုတင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီး ကျနော့်ဆံပင်ကို ယုယစွာသုတ်ပေးသည် `ဆံပင်မခြောက်ရင် ဖျားမယ် ကိုကို´ ဒီအယုအယ အနုအယွလေးတွေမှာ မာယာမပါ […]
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ..ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော်သွားတယ်။“ဦး”“ပြော ခလိန်း”“ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး […]